Windows Vista Language Interface Pack Gbanwee asụsụ:
AfrikaansAmpharicAssameseAzeri (Latin)BaskiBengali (Bangladesh)Bengali (India)CatalanFilipinoGalicianGujaratiHausaHindiIgboInuktitut (Latin)isiXhosaisiZuluKannadaKazakhKhmerKiswahiliKonkaniKyrgyzLaoMalay (Brunei Darussalam)Malay (Malaysia)MalayalamMalteseMāoriMarathiNepaliOnye AlbaniaOnye ArmeniaOnye Bosnia (Cyrillic)Onye Bosnia (Latin)Onye GeorgiaOnye IcelandOnye Indonesia Onye LuxembourgOnye Macedonia (Bubu Yugoslav Repọbliki nke Macedonia)Onye Norway (Nynorsk)Onye Serbia (Cyrillic)OriyaPersianPunjabiQuechua (Peru)Sesotho sa LeboaSetswana (South Africa)SinhalaTamilTatarTeluguUrduUzbek (Latin)VietnameseWelshYoruba
Windows Vista Language Interface Pack (LIP) na-ewepụta Njikọta Ojiaru enwechaghị ntụgharị maka mpaghara ana-ejikarị na Windows Vista
Ụdị:1.0Aha faịlụ: LIP_ig-NG.mlcụbọchị Ebipụtara ya:21/5/2009Nha faịlụ : 2.5 MB
Windows Vista Language Interface Pack (LIP) maka Windows Vista na-ewepụta àgbà ntụgharị nke mpaghara ana-ejikarị na Windows. Mgbe arunyechara LIP, ederede dị na wizaadị gasị, igbe mkparịta gasị, menu gasị, issiokwu Enyemaka na Nkwado gasị, n'ihe ndị ọzọ na njikọta ojiaru ga-egosipụta n'asụsụ LIP. Ederede ahụ nke na enweghị ntụgharị ga-adi n'okpuru asụsụ nke Windows Vista. Iji maatụ, ọ bụrụ na ị zuta àgbà nke Spenụ Windows Vista, ma runye Catalan LIP, ụfọdu ederede ga-adigide na Spenụ. Ị nwekwara ike ịrunye ọtụtụ LIP, yamere ojiaru kọmpụta ọbụla nwere ike igosipụta njikọta ojiaru ha n'asụsụ masiri ha.
• Njikọta ojiaru n'asụsụ ndịa(gasị): Bekee
• 4.63 Mb nke ohere efu maka mbụdata • 15 Mb nke ohere efu maka nwube Ọnọdụ-ọrụ Akwadoro: LIP gasị na-arụ ọrụ naanị n'àgbà 32-bit nke Windows Vista ma agaghị enwe ike runye ya n'àgbà ndị ochie nke Windows maọbụ n'àgbà 64-bit nke Windows Vista. Ntuziaka
Kèrè bọtịnị Bụdata n'ihụ akwụkwọ a iji bido mbụdata, maọbụ họrọ asụsụ d'iche site na ndepụta ndọdata ma kèrè Gaa.
Mee otu n'ime ihe ndịa:
Iji bido nrunye ahụ ngwangwa, kèrè Mepee maọbụ Bido usoronsieme a site n'ebendobe ọhụrụ ya.
Iji kọpịa mbụdata ahụ gaa na kọmpụta gị maka nrunye na mgbe na-abịa, kère Chekwaa maọbụ Chekwaa usoronsieme a na dịịsịk.
Ihe-omume Asụsụ Ọdinaala nke Microsoft